Home Wararka (Deg Deg) RW Kheyre oo xil ka qaadis ku sameeya taliyaha Booliska...
(Deg Deg) RW Kheyre oo xil ka qaadis ku sameeya taliyaha Booliska & Farmaajo oo diiday
Ilo wareedyo ka tirsan xafiiska RW Xasan Cali Kheyre aya MOL u sheegay in uu RW Kheyre xil ka qaadis ku sameeyay Taliyaha Booliska Gen. Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar), balse uu diiday MW Farmaajo. Arrinta aya waxaa ka dhashay muran xoog leh oo u dhexeeya RW Kheyre iyo MW Farmaajo sida ay noo sheegeen ilo wareedyada.
Gen. Xijaar aya laga duubay muuqaal xilli uu war saxaafadeed jeedinayay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Finish isagoo ku amray Gud. Cumar in aanu sheegi karin tirada dhimashada iyo dhaawaca, balse Gud. Cumar uu si farsameysan u sheegay tirada dhaawaca isla markaana sheegay in tirada dhimashada aay tahay mid aad u badan inkastoo uusan sheegin tiro.
General Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) aya loo magacaabay Taliyaha Booliska bishii Ogoosto ee sanadkan, waxaana uu ka hor ka mid aha howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Riyadh ee Boqortooyada Sucuudiga. Gen. Xijaar ayaa saaxib dhow la ah Fahad Yasin.